प्रेम प्रस्ताव राख्न आउँदैन ? यस्तो छ सजिलो तरिका « Naya Page
प्रेम प्रस्ताव राख्न आउँदैन ? यस्तो छ सजिलो तरिका
प्रकाशित मिति : 12 February, 2018 12:22 pm
अहिले विश्वभर प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन डे) सप्ताह चलिरहेको । ‘भ्यालेन्टाइन डे’को प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै गएको छ । नेपालमा पनि युवा–युवतीहरु भ्यालेन्टाइन डेलाई विशेष रुपमा मनाउँछन् ।
भ्यालेन्टाइन डेको विशेषता हो, प्रेमी बनाउनु । यदि तपाईंले कसैलाई मन पराउनुहुन्छ भने, यो समय आफ्नो प्रेम जाहेर गर्ने उपयुक्त मौका हो । धेरै युवा–युवतीले भ्यालेन्टाइन डेलाई आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्ने मौसमका रुपमा बुझ्छन् । यदि तपाईं पनि यो अवसरमा आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्न चाहानुहुन्छ भने मन परेको मायालुलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने सही तरिका जान्नु जरुरी हुन्छ । हामीले आज तपाईंलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने तरिकाहरु बताउँदै छौं । जो निम्नानुसार छन्
– एक सेतो टिसर्टमा एउटा आकर्षक म्यासेज लेख्नुस् । जस्तै ‘आई लभ यू’ वा अरु केही जे भन्न चाहनुहुन्छ त्यही प्रिन्ट गराउनुहोस् । त्यसको माथि एक सट लगाएर छोप्नुहोस । आफूले मन पराउने व्यक्तिलाई एकान्तमा बोलाउनुहोस्, मुस्कान छोड्दै सर्ट खोल्नुहोस् र टीसर्ट देखाइदिनुस् । एजेन्सी